အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းကြီးတခု ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီက ရက် ၉၀ အတွင်း စတင်မည်
Home ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ စီးပွားရေးသတင်း ဆောင်းပါး မြန်မာနှင့် လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ သတင်းပြည်တွင်းသတင်း ဒေသန္တရသတင်း ပြည်သူ့အသံ ကမ္ဘာ့သတင်း ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း ရသသတင်း နာရေးသတင်း အားကစားသတင်း အမှားပြင်ဆင်ချက် အင်တာဗျူး အထူးကဏ္ဍပြည်သူ့စစ်သား သုတေသနနာဂစ် ၁ နှစ်ပြည့် အမေရိကန် ပေါ်လစီနှင့် မြန်မာရေးရာ ကမ္ဘာ့ ဘဏ္ဍာရေး အကျပ်အတည်း ၈ လေးလုံး အထူး အာဇာနည်နေ့အထူး အမေဒေါ်အမာ အထူး ဆန္ဒခံယူပွဲအထူး ကမ္ဘာ့ဖလား ၂၀၁၀ မြစ်ဆုံ ရေကာတာ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲရွေးကောက်ပွဲ သတင်းဖြစ်စဉ်များ ရွေးကောက်ပွဲတွင်း တင်ဆက်မှု ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်လိုသူများ ရွေးကောက်ပွဲ မဝင်သူများ ပါတီအကြောင်း သိကောင်းစရာ ရွေးကောက်ပွဲ အထူး လွတ်မြောက်မှုသို့ သိုမှီးရာရန်ကုန်နှင့်မုန်တိုင်း မြန်မာပြည်နှင့် သက်ဆိုင်သော ကြေးနန်းများ အိုဘားမား မြန်မာ ခရီးစဉ် အာဘော်နှင့်အမြင်ဆောင်းပါး အယ်ဒီတာ့ထံပေးစာ အယ်ဒီတာ့အာဘော် သဘောထားအမြင် ညွှန်းဆိုရာ ရသဘဏ်တိုက်ကဗျာ ပြဇာတ် စာအုပ်စင် ရုပ်ရှင် ခရီးသွားဆောင်းပါး မားလ်တီမီဒီယာဗီဒီယို Photo EssayPhoto Essay. ဓါတ်ပုံ ကာတွန်း ဂျာနယ် မဇ္ဈိမ ရေဒီယို မဇ္ဈိမတီဗီRFA & Mizzima TV Voter Voices Mizzima TV Weekly: Business News ကြေညာချက် Home > သတင်း > ကြားဖြတ်နှင့် သတင်းအကျဉ်း > အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းကြီးတခု ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီက ရက် ၉၀ အတွင်း စတင်မည်
အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းကြီးတခု ဗီယက်နမ်ကုမ္ပဏီက ရက် ၉၀ အတွင်း စတင်မည်	ခင်မျိုးသွယ်	| ကြာသပတေးနေ့၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၈ နာရီ ၄၀ မိနစ်	ရန်ကုန် (မဇ္ဈိမ)။ ။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ အဆောက်အအုံ စီမံကိန်းကြီး တခုအား ဗီယက်နမ် နိုင်ငံ အခြေစိုက် Hoang Anh Construction & Development House Joint Stock Company (HAC & DHJS)က လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့ပြီး ရန်ကုန်မြို့၊ ကမ္ဘာအေးစေတီလမ်းပေါ်တွင် ရက် ၉ဝ အတွင်း လုပ်ငန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်မည်ဟု ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနမှ သိရသည်။နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ဟိုတယ်၊ စီးပွားရေး ဗဟိုဌာန၊ ရုံးခန်းနှင့် အဆင့်မြင့် လူနေအိပ်ခန်းများ ပါဝင်မည့် ယင်း စီမံကိန်းအား HAC & DHJS ကုမ္ပဏီ၏ Hoang Anh Gia Lai Myanmar Company Limited က ရာနှုန်းပြည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် နှစ်ရှည် ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်မည် ဖြစ်သည်။စီမံကိန်းကာလကို အဆင့် နှစ်ဆင့်ဖြင့် လုပ်ကိုင်မည် ဖြစ်သည်။“အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃ဝဝ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ လုပ်ကိုင်မှာပါ။ စီမံကိန်း ကာလအနေနဲ့ ၇ နှစ် ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စီမံကိန်း ကာလ အဆင့်တစ်မှာ ဟိုတယ်အခန်းပေါင်း ၄၁၄ ခန်းနဲ့ ရုံးခန်းပေါင်း ၉ဝဝ ကျော် ပါဝင်မှာပါ။ တည်ဆောက်ရေး ကာလအနေနဲ့ ၃ နှစ်နဲ့ ၆ လ ကြာမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဝန်ကြီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။“စီမံကိန်းအဆင့်မှာ လူနေ တိုက်ခန်းပေါင်း ၃,၉ဝဝ ခန့် ပါဝင်မယ့် အဆောက်အဦ ၄ လုံးကို တည်ဆောက်မှာပါ။ စီမံကိန်းတစ်ကို ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်အတွင်း အပြီးတည်ဆောက်မှာပါ။ စီမံကိန်း အဆင့်နှစ်ကို ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်အတွင်း အပြီးသတ် တည်ဆောက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးရန်နိုင် က ဆိုသည်။စီမံကိန်းအတွက် တည်ဆောက်ဆောင်ရွက် ပြန်လည်လွှဲပြောင်းမှု သဘောတူစာချုပ်နှင့် မြေငှားရမ်းမှု သဘောတူညီ ချက် လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့က နေပြည်တော်ရှိ အမရ ဟိုတယ်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ သည်။“ဗီယက်နမ် ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ လောလောဆယ် ဥပဒေအရ နှစ် ၆ဝ ငှားရမ်းလုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပြီး နောက်ဥပဒေ အရ နှစ် ၇ဝ ငှားရမ်း လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိမှာပါ” ဟု ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးအောင်ဇော်ဝင်း က ထပ်လောင်းပြောကြား သည်။
ထားဝယ် စီမံကိန်း ခြံလျော်ကြေးများ အငြင်းပွားနေရဆဲ	မန္တလေးတိုင်း ဆောက်လုပ်ရေး စီမံကိန်းကြီး နှစ်ခု Royal Hi-Tech လုပ်ကိုင်ခွင့်ရ	ကျောက်ဖြူ အထူးစက်မှုဇုန် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းကို ခြိမ်းခြောက်နေဟု အစီရင်ခံစာဆို	ဆန္ဒပြသူများကို မဖမ်းဆီးရန် ၈၈ က တောင်းဆို	နိုင်ငံ “သိက္ခာရှိစွာ” ဒေါ်စု ဖြေရှင်းလိုကြောင်းပြော	ရန်ကုန်ဆန္ဒပြသူများအား ပုဒ်မ ၁၈ ဖြင့်ခေါ်၍ ပုဒ်မ ၅ဝ၅ ဖြင့် ဖမ်းထား	ထားဝယ် စီမံကိန်းတွင် လုပ်ငန်းရှင်များ ပူးပေါင်းရန် ဖိတ်ခေါ်မည်	Who is Online
We have 135 guests online	www.bysjl.com	© Copyright 1998 - 2012 Mizzima News. All Rights Reserved